Maamul dalabyada isla markaana ku soo qaad shaashadda FirefoxOS ee leh ZTE Open | Laga soo bilaabo Linux
Maamul barnaamijyadooda isla markaana ku soo qaad shaashadda FirefoxOS ee leh ZTE Open
Sida inbadan oo idinka mid ah horeyba u ogtahay inaan taleefan gacanta ku haysto ZTE Open con Firefox OS, oo markaan diyaarinayo Dib-u-eegista, waxaan rabaa inaan ka tago talooyin aan bartay maalmahan.
1 Maareynta codsiyada
2 Qabashada shaashadda
Waxay qabatay dareenkeyga taas, anigoo ah casriga, ma helin ikhtiyaar ay ku maareeyaan codsiyada furan isku mar.
Taasi waa, waxaan furi lahaa biraawsarka tusaale ahaan, ka dibna wax kale ayaan furi lahaa anigoo xiraya kii hore. Waxa aanan ogeyn waxay ahayd taas, anigoo furaya furayaasha HOME dhowr ilbiriqsi, waan maamuli lahaa dhammaan codsiyada furan.
Maalin dhaweyd aniga ayey igu dhacday aniga oo "si kadis ah" u qaatay shaashad. Intii aan tijaabiyay, ma aanan ogaan sida loo sameeyo illaa maanta. Sidee?
Hagaag, adoo isla mar riixaya, isla markiiba, furaha HOME iyo badhanka Power (Daarran)
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Maamul barnaamijyadooda isla markaana ku soo qaad shaashadda FirefoxOS ee leh ZTE Open
La mid ah android markaa
Hagaag, dhamaadka waxaan u maleynayaa in Kernelku la mid yahay Android, laakiin wax laga beddelay. Kaasi waa kiiska, in ADB loo isticmaalo (ama waa la isticmaali karaa) si loo cusbooneysiiyo qalabka
hadaad isticmaasho isla android kernel
Ma sharraxaadda Firefox OS ayaa u muuqda kuwo aad u qurux badan, sidee xawaaraha, isticmaalka, iwm?
256MB oo RAM ah iyo processor-ka 1GHz ah, waa dhakhso badan tahay. 😉
Waxaan u arkaa mid xiiso leh in tani ay tahay kiiska, maaddaama ay ku saleysan tahay nooca culus ee Android (ICS). Kufiican wiilasha Mozilla.
Waa hagaag, ka fikir in, halka cusbooneysiinta Android ay noqon karto 1.4 GB, cusbooneysiinta FirefoxOS kama badna 150 MB. 😀
Ka sokow taasi waxay ka takhalusaysaa «il-cun-cun» ee Java (Dalvik).
Runtu waxay tahay, waxaan u maleynayaa in Mozilla ay shaqo fiican qabatay. Sidaan ku iri qoraal kale, hadda in WhatsApp la heli doono kahor dhammaadka sanadka, dhib uma arko iibsiga mid. Maadaama ay ficil ahaan tahay dalabka aan isticmaalo.
Shaki ayaan qabaa, codsiyada waa kuwa maxalliga ah, ma webapps mise labadaba? Ma aragtaa farqi u dhexeeya midka kale kan kale, marka laga reebo waqtiga rarka?
Salaan iyo waxaan rajeynayaa dib u eegista!
Haa haa, waxay sameynayaan shaqo aad u fiican, laakiin waxaa jira dhibco daciif ah. Tusaale ahaan, si rasmi ah uma aysan sii deyn Dhismo loogu talagalay ZTE Open, marka waa inaad ka soo ururisaa GitHub.
Muhiimadu waxay tahay, markaan bilaabayo uruurinta, waxay ii soo dirtaa inaan ka raadsado xeelad googlecode halkaasna wax walba waa lagu kala firdhiyaa, maxaa yeelay Cuba ma lahan marin. Geekphones waxay leeyihiin dhismayaal la heli karo si loo soo dejiyo.
Haddii kale, heer sare Oo iyagu waxay yiraahdaan iyadoo noocyada cusub wax walboo hagaagayaan, waxqabadka, saameynta ...
Ninyahow, anigu garan maayo sida arrintu uga taagan tahay Cuba, laakiin qofna ma idiinka soo diri karaa qoraalka bannaanka? Mise waxay noqon lahayd mid aan waxtar lahayn?
Sikastaba, wax iiga shakiya FxOS ayaa ah in barnaamijyadu yihiin webapps. Tani waxay iga dhigaysaa wax yar oo aan aamin ahayn. Xaqiiqda ah inay ku dhan tahay shabakadda.
Waxaan u maleynayaa in codsiyada caadiga ah aysan dhici doonin, sax? Waxaan leeyahay kuwa Telefoonka, SMS, ...
WebApps la mid maahan websaydhka ... barnaamijyadu waxay ku shaqeeyaan maxalliga waana qodobka ay tahay inaan jabinno si aan mar dambe loo aaminin Firefox OS
Codsiyada, haa, qaar maxalli ah, kuwo kale oo ka soo horjeeda internetka. Kuwa maxalliga ah waxaan u isticmaalaa: Kaydinta aniga ii badbaadinaysa xiriiriyahayga MicroSD, iyo Explorer, si aan u arko faylasha ku jira MicroSD oo ay si fiican u shaqeeyaan.
Waxaan rajeynayaa in mashruuca "Ubunto Phone" ee Kanonikalku uu gebi ahaanba fashilmay.
Ubuntu wali waa Linux kadib ...
Aakhtar!: Taasi maahan Geesinimo. Geesinimada runta ahi waxay leedahay Gravatar (Si aad u ogaato, dul-duubo avatar-ka oo eeg haddii muuqaalka Gravatar uu soo muuqanayo).
Rabitaankaagu wuu rumoobi doonaa (horeyba waxay ugu fashilmeen dhaqaale ahaan Ubuntu Edge).
maxaa kugu dhacay
Waxaan xasuustaa ka hor intaadan firfircooneyn halkan
Nacalad ma aanan aqrin faallada
Marka waa isku mid
Fail xun xD
Aniguba daqiiqad baan aaminay. Hadda, waxay u muuqataa in isla khiyaanadan uu soo xirtay dhar kale.
[Habka kalluunka: on]
Si daacadnimo ah, sifiican uma fahmin faalladaada, waxaan u maleynayaa inaad ula jeedo inaad geesi tahay, sax? Ok, dabcan dabcan hahaha haddii qosolkaas, wax yar baad khaldan tahay!
Uma maleynayo inaad kaftankeyga fahantay (iyo xitaa wax ka yar oo ku saabsan Catfish, oo ahaa dukumiinti ku saabsan nin jacayl u qaaday gabadh iska dhigeysa qof kale).
Waxaan ugu yeeray taas "gelinta afar."
[Habka kalluunka: off]
Jawaab Eliot Reyna
Kaalay, kaalay oo jooji jirdilka aan kuu geysano ... ha ku dhawaaqin dib u eegista mar dambe oo kaliya daabac, waxaan u sugayaa inay tahay wax wanaagsan ...
Charlie-Brown sidoo kale waan rajeynayaa. Waxaan la yaabanahay inay si habsami leh u socoto 256mb. Waxaan u maleynayaa in cilladda uu android aad ugu baahan yahay wan weyn ay ka timid mishiinka dalwada ee dalvik ah iyo inuu ku shaqeynayo java. Ma fahmin sida aysan ufududeyn….
Dhinaca kale waxaan rajeynayaa inaan arko waxa noqon doona jawharad iyo tizen….
Sugitaanka Dib-u-eegista waa inaan beddelaa moobilkeyga isla waxkuna wuu dhacayaa.
Waxaan rabaa in aan isku dayo OS-gaan hal maalin.
Waxaad ka gudubtay adigoon u arkin macno leh WP iyo Lumia 520, inaad dhahdo waxaad xiiseyneysaa inaad tijaabiso 🙂 Waa mucjiso Kirismas ah !!!
Waxaan idhi waxaan doonayaa inaan tijaabiyo, maahan inay macno samaynayso XDDD! Waxba ugama beddelan lahayn taleefannada daaqadaha.
Hambalyo elav ee cusub ee ZTE Open, waxaan ku faraxsanahay inaad durba heshay khiyaamada 🙂 Ku sii wado tilmaamahan, waxba ma yeelaan.
Waxa aan ka filan lahaa FirefoxOS waa in laga beddeli karo wax ka badan android iyada oo aan loo baahnayn xidid. oo aan xaddidnayn dhinaca hawlwadeennada, laakiin taasi waa riyo daqiiqad ah.
Sugitaanka Dib U Eegista !!!!!!!!!!!!!!!!
Sawirka ugu dambeeya waxaad ka arki kartaa astaanta DesdeLinux, ma marin toos ah ayaa loo helayaa bogga?
Sidee buu facebook u shubtaa? (waa fb xun laakiin waa lagama maarmaan (?))
Waxaan rajeyneynaa in WhatsApp uu dhowaan imaan doono, waxaana rajeynayaa dhawaan in laga heli doono Argentina.
Ku jawaab Calevin
Salaan! Waad ogtahay, waxaan doonayaa inaan iibsado taleefan cusub maalmo yar gudahood, waxaana jeclaan lahaa inaan ogaado faahfaahinta qalabkan. Dad badan ayaa dhahaya waa kooxda ugu xun, laakiin waxaan u arkaa inay tahay mid soo jiidasho leh oo faa'iidooyin badan leh, waa hagaag, aniga xitaa geel ma ihi, waxaan ahay laylis iyo dookhaygu waa kooxaha xoogaa fudud. Ma iiga jawaabi kartaa waxyaabaha soo socda?
Waa sidee isdhexgalka shaashadda taabashada? waa gaabis, ma dhakhso?
imisa jeer ayaa la cusbooneysiiyaa? Ma shaqeeyaan? Ma jiraan isbeddelo? Ma inaan dheelitir yeeshaa haddii aan rabo inaan cusbooneysiiyo?
Kharash ayey ku jirtaa in laga soo dejiyo twitter-ka barta 'MarketPlace' ... mise waa lagama maarmaan in la helo qorshe internet oo lagu furo suuqa?
Jabaqda iyo muusigga iyo qalabka digniinta… miyay ku habboon tahay in kor loo qaado madax hurda sidaan oo kale? Waxaan ula jeedaa mug iyo gariir iyo waxaas oo dhan.
Meelo badan ayaan ka akhriyey inaadan beddeli karin ringtone-ka wicitaannada ... xaaladdu siday doonto ha noqotee, sidee loo sameeyaa?
Waxaan rajaynayaa inaanan kuman qorin qoriga su'aalaha, in kastoo aan u maleynayo inaan sameeyay, laakiin waa sabab wanaagsan! C: Waad ku mahadsan tahay horay!
Berri si deggan baan kuugu jawaabi doonaa .. Salaan
Runtii waxay kuxirantahay barta aad fiiriso. Waxaan u arkaa ZTE inuu yahay terminal aad u fiican (xagga naqshadeynta iyo waxqabadka) ee dadka awoodda wax iibsi yar ama kuwa doonaya wax fudud.
1- Taabashadu waxay kuxirantahay nooca FirefoxOS ee aad rakibtay iyo tirada barnaamijyada furan, maadaama jawaabta ay sareyso ama ka hooseyso iyadoo kuxiran waxqabadka. Taasi haddii, inkasta oo aysan noqon karin Galaxy ama iPhone, waa wax la aqbali karo.
2- Cusbooneysiin kasta waxaa ku jira isbedelo. Waxaad leedahay 3 qaab oo aad ku sameyso:
- Ama sug wararka rasmiga ah ee ka imanaya shirkadda ZTE, kuwaas oo inta badan gaabis ah.
- Ama waxaad isticmaaleysaa ROM oo uu soo ururiyey xubin ka tirsan Bulshada.
- Ama waxaad soo uruurineysaa ROM-kaaga.
3- Haddii aad heysato meel aad ku xirto WiFi, uma baahnid qorshaha shirkadda ee internetka.
4- Qaylo-dhaantu waa fadeexad .. i aamin hahaha.
5- Waa run in noocyada kala ah 1.0 ilaa 1.2 aanad badali karin codadka "si fudud", laakiin laga bilaabo 1.3 waxaad dejin kartaa codad khaas ah. Had iyo jeer waxaa jira qaab lagu beddelo waxyaabaha marka sheyga uu yahay OpenSource, laakiin shaqadu xoogaa way adag tahay, maadaama aad u baahan tahay inaad ku beddesho codadka rasmiga ah kuwa aad rabto inaad ku darto.
Waad ku mahadsan tahay maalin kasta waxaan ogaaneynaa siyaabo badan oo aan kula macaamili karno qalabkan aadka u wanaagsan.
Gacaliye Elav, ma soo rogi kartaa cashar ku saabsan sida loo rakibo FIrefox OS Samsung GT-S5830M, horay ayaad ugu mahadsan tahay… Slds.
Ku jawaab gabux22
Hagaag waxaan hayaa taleefanka gacanta laakiin maahan wax weyn, waa heer hoose sidaad ogtahay, laakiin aad ayuu u hooseeyaa, aad ayey u badan tahay markay markay rabaan inay adeegsadaan codsiyada badan oo ay beddelaan arjiga, codsiyada kale guud ahaan xiran oo anigu taas ma jecli gabi ahaanba (Sida tusaale ahaan MAPS). Haddii kale waxay la jaanqaadaysaa qiimaheeda.
Ku jawaab DJCA
Waxaan iibsaday ZTE Open ee V.1.1 waxaanan kuu sheegi doonaa waxyaabo aad u xiiso badan:
1- Telefoonku, sida ay horeyba u sheegeen, waa mid aad u hooseeya, hase yeeshe, qiimuhu waa wanaagsan yahay.
2-in kasta oo ay leeyihiin barnaamijyada lagu maareeyo, barnaamijyadu way xiran yihiin, taasi waa khasaaro.
3- Ma jiro barnaamij rasmi ah oo WhatsApp ah wali, si kastaba ha ahaatee macnaheedu maahan inaysan jirin WA ee Firefox OS, waxaa jira barnaamijyo sida OPENWAPP, CONECTA2 IYO LOQUI IM, way wanaagsan yihiin, xitaa kuwa wax barta, WhatsApp bogeeda rasmiga ah waxay ku bixisaa waxyaabo kala duwan adeegyada Open Source.
4- isdhexgalka waa mid aad u wanaagsan, waa deg deg, wax yar oo dhib ah in la qoro (ugu yaraan kuwa aan loo baran inay taabtaan aniga oo kale)
Isku soo wada duuboo, waa taleefan wanaagsan, sida iska cad way ka caban doonaan maxaa yeelay qaar badan ayaa filayay wax kale, laakiin kadib markay si fiican u maqlaan in AAN aheyn taleefan heer sare ah, WAA SHAQO-YAR MUDOON, telefoonku aad buu u fiican yahay, aad buu u wanaagsan yahay waxa loo sameeyay, dadka si fudud u doonaya wax cusub, fudud, iyo baahiyahooda aasaasiga ah.
Jawaab ku bixi Daniel Herrera
Waxa aad qortay horeyba waa loo cadeeyay
Haddii waxa aad u jeeddaa ay tahay in horeyba loo ogaa, markaa waad saxantahay, kaliya markaan qorayo qoraalkan (waqti hore) qaar badan ma aysan ogeyn. Tan waxaan kuugu sheegayaa saaxiib, haddii haddii waxa aad doonaysay inaad tidhaahdo ay intaas uun ahaayeen, faalladaadu wax macno ah ma samaynayso.
Waad salaaman tahay, waxaan doonayay inaan ogaado sababta aysan u aqbalin nambarka taleefankayga si whassap uu iigu soo diro koodhka, waxaan ka imid Uruguay. Mahadsanid
HAHAHA, waxaan inbadan ku raadinayay taleefan ikhtiyaarkaas ah waxaanan iska casilay naftayda inaan haysto. Aad baad u mahadsan tahay, in kasta oo aan weli u doonayo telefoon kale faahfaahinta qaar.
Ku jawaab Giriis
[HUMOR] Buugga Kanonical, Canonipple, Microsoft
Sida loo rakibo LAMP Ubuntu